Talooyinka timaha madow ee baaskiil wadayaasha - dieselboss
Talooyinka timaha madow ee baaskiil wadayaasha
Xaqiiqda murugada leh: Waxaa jira dagaal dhab ah oo u dhexeeya timaha iyo jimicsiga bulshada madow. Daraasad 2018 lagu daabacay Xuduudaha Caafimaadka Dadweynaha waxaa la ogaaday in ay caadi u tahay dumarka madowga ah in ay iska ilaaliyaan ama xaddidaan jimicsiga rajada ah in ay ilaaliyaan ama badbaadiyaan timaha timaha maadaama aysan mar walba suurtogal ahayn in ay sameeyaan nidaam dhaqid oo buuxa ka dib jimicsi kasta.
Cilmi-baadhisyo dheeraad ah oo sida daraasaddan iyo warbixinnada maqaalkan ayaa lagu ogaaday in inta u dhaxaysa 28 iyo 45 boqolkiiba dumarka madow ee la waraystay ay ka fogaadaan jimicsiga sababtoo ah dhibaatooyinka timaha, 22 boqolkiiba waxay aaminsan yihiin in timahooda ay ka horjoogsadeen inay sii wadaan miisaan caafimaad leh.
Tani waa dhibaato dhab ah oo loogu talagalay haweenka madow iyo xitaa ragga qaarkood oo leh timo dabiici ah ama dabacsan. Waxaad arkaysaa, iyadoo ceeryaamo fudud oo shaambo engegan ah ama maydh shan daqiiqo ah ka dib fadhi …
Entrada anteriorAnterior ▷▷ 2021 ▷ El patrimonio neto de Amy Roloff
Entrada siguienteSiguiente INDUSTRIA – Requisitespara1.com